Arsenal Waa Iney Ku Guuleysato Horyaalka Ama Waxey Gali Doontaa Sanado Kale Oo Abaar Ah | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Arsenal Waa Iney Ku Guuleysato Horyaalka Ama Waxey Gali Doontaa Sanado Kale Oo Abaar Ah
Halyeeygii hore kooxda Liverpool iyo Xulka England Jamie Carragher ayaa digniin u diray Arsenal isagoo u sheegay iney ku guuleystaan horyaalka xagaagan ama ay diyaar u noqdaan iney galaan 10-sano kale oo abaar ah.
Gunners ayaa ku guuleysatay iney ku dhameysato halka ugu sareysa horyaalka wareega hore horyaalka xili ciyaareedkaan kadib guul ay ka heleen Bournemouth iyadoo Leicester City ay barbaro la gashay Manchester City.
Labada Manchester ayaa xagaagan uusan u aheyn mid wanaagsan iyadoo koox walba ay ku jirto xanuunkeeda inkastoo kooxda Pellegrini ayba ku dhawdahay hogaanka halka Van Gaal iyo wiilashiisa ay ka dhacsan yahiin.
Ma ahan markii ugu horeysay oo ay Arsenal sanadka cusub hogaanka horyaalka ku dhaganaato waxeyna dhacday dhowr jeer balse waxey kooxdaan hoos u dhac sameysaa marka la gaaro bilsha February iyo March.
“Hadii Arsenal aysan markaan ku guuleysan horyaalka, waxey gali doonaan 10-sano kale oo koob la’aan ah” Ayuu yiri Jamie oo la hadlayay Sky Sports.
Jamie Carragher ayaa aaminsan in Arsenal ay heysato fursada ugu fiican madama Chelsea ay ka dhacsan tahay xagaagan, Man City iyo Man United iyagana ay dhibaatooyin dhanka ciyaartoyda ah qabaan.
“Tani waa Arsenal waana tan heysata fursada ugu weyn, waana iney ka faa’ideystaan”
Ugu dambeyntiina Arsene Wenger ayaa ka dhawaajiyay iney bisha January ku mashquuli doonaan suuqa kala iibsiga.